Sifotra Bob lalao - hilalao afaka amin'ny Lalao - Lalao
Sifotra Bob lalao
Alohan'ny hanombohana ny hilalao lalao maimaim-poana amin'ny aterineto letaha Bob, dia tsy maintsy fantatsika fa izany no mahafinaritra ny mahandro lojika be pitsiny maro fandrika mpitsidika. Niaraka tamin'ny mahery fo tany amin'ny toerana, ianao tonga amin'ny gimmicks sy ny rafitra mba ho mihazakazaka. Tsy maintsy manao zavatra araka ny tetika, raha manosika ny bokotra na hisintona ny fanoitra avy ny fotoana, na inona na inona mitranga. Bob mihetsiketsika tsy nijanona, ary tsy maintsy hisakanana azy tsy ho lavo tamin'ny spikes na avy amin'ny avo be. Miara-manatsoboka tokony hofongorana; mandeha an-dalana rehetra ny miafina, rehefa fanjaitra; ny tsy hanapaka ny atraka.
Lalao Letaha Bob tamin'ny Category:
Farany Sifotra Bob lalao
Lalao Online Rehetra Sifotra Bob lalao
madinika sy udalenky
isan-karazany lalao letaha Bob hilalao maimaim-poana izao azo atao tsy misy olana, satria io toetra amam-panahy dia efa namoaka be dia be ny mahaliana ordinatera fialam-boly izay mitambatra mitovy tantara: ny maitso letaha atao hoe Bob foana ny mahazo miakatra amin'izay fanovana, fiovana. Ny mpilalao mila hanadio ny làlana mankany amin'ny fivoahana amin'ny ambaratonga manaraka ary hanampy ny hahazo soa aman-tsara avy tany rehetra niainany. Teny an-dalana ny maherifo nahita hantsana mampidi-doza tsy zaka manda, ary olana maro hafa. Mandritra izany fotoana izany, misy rafitra mba hanafoanana ireo vato misakana:
zhmёsh ohatra, ny bokotra - sy ny Bob miakatra mekanika varavarana;
misintona ny fanoitra - ary ny elanelana mikatona sliding sehatra,
, miala ny crank - sy ny letaha nitodika tany nandady am-pita.
firotsahana amin'ny dia iray mahavariana, milalao lalao letaha Bob
Na dia eo aza ny mitovy amin'izany lalao kilalao, saika maimaim-poana rehetra letaha Bob lalao manana ny tranga tsy manam-paharoa. Ohatra, ao amin'ny tapany voalohany amin'ny traikefa nahafinaritra sifotra ny tranony rava noho nandavaka, ka dia lasa izy nankany hitady trano vaovao. Eto dia mila mieritreritra tsara ny hetsika mahery fo mba hifindra tany hafa ambaratonga;
mampiasa ny manandratra,
mitaingina ny sarety,
ny mpitarika ny ao amin'ny faritra,
mamorona letaha tetezana.
Amin'ny ankapobeny, ny tapany voalohany dia manolotra traikefa nahafinaritra ny lalao teo amin'ny toeram-panorenana, izay mandrahona Bob latsaka ao amin'ny lavaka tsy hita noanoa sy ny ratra avy amin'ny fikirakirana voahevitra rafitra.
Ny tapany faharoa miresaka momba ny lalana sarotra nitsidika Bob ny raibeny, izay tokony ho niarahaba ny fitsingerenan'ny andro nahaterahany. Tamin'ny fotoana ity lalao ity amin'ny aterineto dia tsy maintsy nandady letaha Bob tena mampatahotra amin'ny alalan'ny ala. Ireo toerana manana kokoa mampidi-doza, satria maro zavaboariny ala izay tsy nisalasala hihinana Bob. Efa miomana ho fandrika ho azy: ny caterpillars efa nesorina ny tetezana ka nataony teo amin'ny fitoerany vilany ny rano mangotraka, mba mahandro Lasopy ny sifotra, ny mpihinana nofom voninkazo maranitra ny vazany dia vazan'ny mba handevona ny ory Guy velona. Ny andian-fitaovana izay mety tsy letaha loza. Mpankafy sy ny balaonina hanitsy ny hetsika Bob fitraitraiky, swinging baolina sy mitifitra loharano manosika azy io ho any amin'ny fivoahana.
Ao amin'ny ampahatelon'ny ny niainany naka letaha fitaovana mahagaga fahiny, ary izany dia niampatra teo an hafakely Ejipta. Fa ny fahombiazana vita ny lalao tokony ho afa-tsy ny mahery fo amin'ny loza, indray mampiasa fitaovana mekanika, fa amin'ny fanavaozana: Levels afaka manangona Bonus kintana sy ny lalan-tsarany manokana ny sary ho toy ny andraikitra ho havaozina amin'ny sary. Games manokana ho an'ny zazavavy letaha Bob tsy mamorona: ny niainany zavaboary mampihomehy dia tonga lafatra, ary ny ankizilahy sy ny ankizivavy, ary na dia ny renibe - misy gamer, na inona na inona ny lahy sy ny vavy sy ny taona mihazona fotoana tsara amin'ny toetra amam-panahy io.